SONATA-CANTATA: အလှတရားရှာပုံတော် (၄)
နွေမလို့ ခေါ်ချင် ခေါ်လိုက်လေ…။ တို့က ဒီလို့ပဲနေတတ်တာ…။ လွတ်လပ်တယ်။ ပေါ့ပါးတယ်။ လေးလံမှုတွေကို ခ၀ါချထားတယ်။ ဟန်မဆောင်ချင်ဘူး။ ဘာရယ်? နွေဦးရဲ့ လေရူးတွေမှာ နွေမရဲ့ လှောင်ရယ်သံတွေ ကပ်ပါနေတယ်…ဟုတ်လား။ ဟိုး..ဟိုး ဒါတော့ တဆိတ်လွန်ပြီ…။ မာယာအကြောင်း ကောင်းကောင်းသိပေမဲ့ နွေမ.. ဘယ်တုန်းက အရိုးပေါ် အရွက်ဖုံးခဲ့လို့တုန်း ပြောစမ်းပါအုံး။ ဖုန်တွေ တသောသောလို လူတကာနဲ့ ရောရော နှောနှောလို့ နွေမရဲ့ ပွင့်လင်းမှုကို ရှင် အပြစ်မြင်တယ်။ တချိန်ကတော့ နွေမရဲ့ သဘာဝက အရိုးခံအလှဆို…။ ထားပါတော့လေ…တံလျပ်ကို ရေထင်မိတာ နွေမ အမှားဆိုလည်း နွေမဘ၀နဲ့ နွေမသာ ရှိပါစေတော့…။ မိုးနဲ့ ဆောင်းကိုသာ နွေမလို နှလုံးသားတွေ မခန်းခြောက်ရအောင် သတိပေးထားရမယ်။
မိုးရေလို ခေါ်လိုက်ရင်… မြောက်ကနေ တောင်ဖြစ်ပစေ အပြေးလေး အရောက်လာတတ်တာ သူအသိပါလေ။ ရွာမလိုနဲ့ ညို… ညိုမလိုနဲ့ ပြို…အဲဒါ အဲ့ဒါတွေက မူယာမာယာတွေ မဟုတ်ရပါဘူး… ချစ်လို့ ကျီစားတာပါ။ ဒါကို သူက ရိုးမယ်ဖွဲ့ပြီ်လား။ တခါတလေ စိတ်ကြီးတဲ့ မိုး… ထစ်ချုန်းသံတွေနဲ့ သူ့ရင်ကို တအုံးအုံး ထုမိတာကို ချော့ကာမှပိုဆိုး အကဲပိုလွန်းတယ်လို့ ညူစူရက်တယ်နော်။ ပျော်ရင်လည်း ငို၊ စိတ်ညစ်ရင်လည်း ငိုတတ်တဲ့ မိုးဘ၀ကို ငြီးငွေ့စရာကြီးလို့ သူယူဆမှတော့ မိုးနေရာကလည်း ခံစားကြည့်ပါဦးကွယ်လို့ ဘယ်လို ပြောသာတော့မှာလဲ…။ ရှိပါစေတော့လေ ထားရာနေ စေရာသွားရတဲ့ဘ၀မှာ လွမ်းရင်လည်း ငိုတတ်နေပါပြီ…။ မိုးငိုရင် ကလေးတွေကတော့ ပျော်ကြလို့ ဖြေသာပါတယ်။ ဆောင်းနဲ့နွေရေ မိုးလို အုံ့မှိုင်းခြင်းတွေ ကင်းဝေးကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် သူငယ်ချင်းတို့ရေ…။
အခုတော့လည်း ဆောင်းရဲ့အဖော်က နှင်းလေးတွေမှတပါး အခြားမရှိတော့ပါဘူးလေ။ အေးခဲနေတဲ့ ဆောင်းနှလုံးသားကို ဖွေးဖွေးဖြူတဲ့လက်ကလေးတွေနဲ့ မွမွလေး တို့ထိလို့ အားပေးနှစ်သိမ့်ကြပါတယ်။ သူတို့ ကိုယ်တိုင်က အေးမြနေမှတော့ နွေးထွေးမှုကို သူတို့လေးတွေ ဘယ်လာဆောင်ကြဉ်းနိုင်ကြပါ့မလဲ။ ဒါကို ဆောင်းလည်း သိတယ်။ သူတို့လည်း သိပါတယ်။ သိရက်နဲ့ သိရက်နဲ့ပဲ… ပုဝါ ပါးပါးလေး ခြားထားသလို မပီပြင်ဝိုးတ၀ါးတဲ့ အိပ်မက်မြူတွေနဲ့ နေသားကျနေပါပြီလေ။ တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေကျတဲ့ သစ်ရွက်လေးတွေကတောင် ဆောင်းရေ… မင်းကို မချစ်လို့ မဟုတ်ပါဘူးကွယ် လို့ မလုံမလဲ ပြောသွားကြတယ် နွေနဲ့ မိုးရယ်…။ ဆောင်းတို့ ဆုံနိုင်ခွင့်ရှိသေးရဲ့လားဟင်?
ပုံကို ဤနေရာမှ ယူပါသည်။